2019 - Myanmar Youth and Student Association
Benefits to Join Us as Executive Committee Member
MYSA Academic and Career Event 2019
22 Oct, 2019 in MYSA Events by admin
Myanmar Youth & Student Association ( MYSA ) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော MYSA Academic & Career Event ကို လာရောက်ပေးသော မောင်လေး ညီမလေး များ နှင့် ပွဲတွင်ပါဝင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့သော စီနီယာ များနှင့် volunteers များ အား MYSA Academic & Career Team မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ပဲ တစ်ယောက်ချင်း ဆီ ကို One by One အနေနှင့် ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လာတက်ရောက်တဲ့ […]
မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမြို့ သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူ နှင့် MYSA အဖွွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံခြင်း
22 Oct, 2019 in General by admin
၁။ မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမြို့ သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူသည် Myanmar Youth and Students Association (MYSA)မှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၁၅-၉-၂၀၁၉ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ၁၃:၃၀ နာရီတွင် မြန်မာသံရုံး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ၂။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရှေးဦးစွာ အဖွဲ့ဝင်များမှ သံအမတ်ကြီးအား တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်၍ ၎င်းတို့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိပညာသင်ယူနေမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှုအတွေ့အကြုံများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ သံအမတ်ကြီးမှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ် အခက်အခဲများရှိက သံရုံးသို့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ကြောင်း၊ Myanmar Youth and Students Association (MYSA)၏ သံရုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု […]
2019 Free Medical Check up
ဒီနေ့ MFCGမှ ဦးစီးကျင်းပသော Free Medical Check Up ပွဲလေးမှာ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြသော MYSA Volunteer များ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နောက်ပွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်ကူညီပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
2019 Myanmar Festival
22 Oct, 2019 in Myanmar Festival by admin
မြန်မာ ပွဲတော် ၂၀၁၉ ပထမနေ့ တွင် ပါဝင် ဖျော်ဖြေ ပေးသွားပါသော MYSA၏ စေတနာကောင်းတဲ့ volunteers အကမောင် ငယ် ညီမငယ် အစ်ကို အစ်မ များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ကျေးဇူးတင်လွှာ တိုင်းရင်းသားအကကိုအလှပဆုံး ကပြနိုင်ဖို့ သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ အစ်မ မခင်မိုးမိုး နဲ့တကွ ခေတ်ပေါ်တီးလုံးတွေအတွက် အလှပဆုံးသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ အစ်မပိုးယု ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်…. 🧡MCအနေနဲ့ ကူညီအားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ ညီမလေး အိမ့်ပြည့်နဲ့ မောင်လေး ပိုင်သက်ကို ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်…. 💜Performers တွေကို မိတ်ကပ်အလှ ဆံပင် ဆံထုံး ကူညီပေးခဲ့တဲ့ အစ်မမေသွယ်၊ ညီမ ခက်မွန်ဝင်း၊ အိမ့်မှူးမြင့်မိုရ် ၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆုမို၊ […]
2019 MYSA Myanmar New Year Party
ပိတောက်တို့နဲ့အတူ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကိုကြိုဆိုခဲ့တဲ့MYSA Myanmar New Year Party
2019 ASEAN Sports Festival
Congratulation Myanmar Gold Medal for Futsal (Champion) , Sliver Medal for Badminton .This is one of the exciting moment for us in 2019.Congratulation Myanmar Gold Medal for Futsal (Champion) , Sliver Medal for Badminton .This is one of the exciting moment for us in 2019. Really excited for every single […]
2019 MYSA မဟာဘုံကထိန်
အိုဆာကာရောက်မြန်မာများနှင့်အတူ MYSA မှဦးစီးကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် Osaka မဟာဘုံကထိန်ပွဲကို ယနေ့ ၂၄/၁၁/၂၀၁၈ (စနေနေ့) မှာ Osaka မြို့တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ကထိန်အလှူတော် နှင့် ကထိန်အထွေထွေအသုံးစရိတ်ဆိုပြီး ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၃၃၁၀၀၀-ယန်း (သုံးဆယ့်သုံးသောင်းတစ်ထောင်ယန်း) ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကထိန်အလှူတော်အတွက်အထွေထွေ အသုံးစရိတ် များထဲမှာ သုံးပြီးပိုသော အလှူငွေများကို ကထိန်အလှူတော်ငွေအဖြစ်ပေါင်းထည့်ပြီး Satori ဝိရဟာ ဆရာတော်ထံ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာတော်မှ ကျောင်းတိုက်အသစ်ဆောက်လှူတဲ့နေရာမှာ အလှူငွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသော တရားနာပိရိတ်သတ်အားလုံး တစ်ဦးချင်းစီကို ကျွန်တော်တို့ MYSA မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပို၍လာရောက်ခဲ့ကြပြီး စတုဒီသာထမင်း နဲ့ ဟင်းတွေကိုလည်း အားလုံးအတွက် သေချာစီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စတုဒီသာအလှူရှင်များကို လည်း တဦးချင်းစီအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ […]
· © 2020 Myanmar Youth and Student Association · Powered by · Designed with the Customizr theme ·